काँग्रेसमा यी नेताले अन्तिम कार्ड खोल्दै – Himshikharnews.com
३ मंसिर २०७८, शुक्रबार १८:५४
महाधिवेशन नजिकिदै गएपनि नेपाली काँग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरुले अहिलेसम्म आफ्नो राजनीतिक कार्ड खोलेका छैनन् । सभापतिको दाबी गरेका केही प्रभावशाली नेताहरुको न त टिम तय भएको छ न त कसैसँग समिकरण बनाउने स्पष्ट भएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः दाहोरिने प्रतिष्पर्धाको आन्तरिक तयारीमा छन् । उनले अन्य प्रभावशाली नेताहरुको साथ लिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, भित्र भित्र केही अनौपचारिक सहमति बनेको तर बाहिर नखुलेको बुझिएको छ ।
सभापतिका आकांक्षी प्रकाशमान सिंह सबैभन्दा आक्रामक देखिएका छन् । उनले सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि मात्र नभई महामन्त्री डा. सशांक कोइरालाविरुद्ध पनि कडा बोलिरहेका छन् । सिंहले आफ्नो टिम भने देखाएका छैनन् । न त कुन नेतासँग समिकरण बनाउने स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफ्नो मुख्य कार्ड अझै खोलेका छैनन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल ब्याक भएका छैनन् । उनले आफ्नो विगत समूहलाई एकजुट बनाउने प्रयास थालेका छन् । कोइराला परिवार र सिंहको साथ लिने प्रयास गरिरहेका छन् । विकल्पमा सबैलाई मिलेर साझा उम्मेदवार बनाउन सके छाड्ने बताइसकेका छन् । उनले कस्लाई साथ दिने हुन् स्पष्ट गरेका छैनन् ।
महामन्त्री सशांक कोइराला सभापतिको आकांक्षी हुन् । उनी कोइराला परिवारको साझा उम्मेदवार बन्ने सम्भावना लगभग छैन । केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइराला कुनै हालतमा सशांकलाई साथ नदिने घोषणासाथ बढेकी छिन् । उनी शेखर कोइरालाको नाममा सकारात्मक छिन् । तर, उनले अझै आफ्नो मुख्य कार्ड खोलेकी छैनन् ।
शेखर कोइरालाले परिवार एकजुट मिलाउने प्रयास थालेका छन् । तर, सकेका छैनन् । उनले देउवाविरुद्ध लड्ने स्पष्ट संकेत गर्दै आएका छन् । उनको टिममा को को पर्ने हो स्पष्ट छैन ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधि देउवाविरोधी देखिइसकेका छन् । उनको पनि टिम स्पष्ट छैन । कस्को समर्थन पाउने वा कस्लाई समर्थन गर्ने हुन् टुंगो छैन ।
उपसभापति विजयकुमार गच्छेदार सबैभन्दा मौन छन् । उनले देउवालाई साथ दिने या नदिने स्पष्ट छैन । गच्छेदारले पनि आफ्नो महत्वपूर्ण राजनीतिक अस्त्र खोलेका छैनन् ।
काँग्रेसका हस्ती नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महतलगायत नेताहरु पनि सभापतिका आकांक्षी हुन् । तर, उनीहरुले छाड्नुपर्दा कस्लाई समर्थन गर्ने हुन् स्पष्ट छैन ।
गगन थापा प्रकाशमान सिंहको नजिक देखिएका छन् । प्रदीप पौडेल कृष्णप्रसाद सिटौलाको पक्षमा छन् । सिटौला पक्ष विगतभन्दा कमजोर देखिएको छ । सिटौला केही सुस्ताएपनि कस्लाई साथ दिने हुन् स्पष्ट पारिरहेका छैनन् । उनले पनि राजनीतिक कार्ड अझै खोलिसकेका छैनन् । अब क्षेत्रीय अधिवेशन सकिएर जिल्ला अधिवेशनसम्म पुग्दा धेरै नेताहरुले कार्ड खोल्ने देखिन्छ । उनीहरुले त्यतिबेला कित्ताकाट गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।